Akụkọ WTTC ọhụrụ na-enye ndụmọdụ itinye ego maka njem njem na njem nlegharị anya COVID
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Akụkọ WTTC ọhụrụ na-enye ndụmọdụ itinye ego maka njem njem na njem nlegharị anya COVID
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • isiokwu Parks • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Julia Simpson, onye isi oche & onye isi oche WTTC
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, gọọmentị na ebe njedebe kwesịrị itinye ego ma dọta itinye ego site na ụlọ ọrụ onwe na mpaghara dịka akụrụngwa anụ ahụ na dijitalụ, yana akụkụ njem dịka ahụike, ahụike, MICE, na -adigide, njem, ọdịbendị ma ọ bụ ezubere iche - gụnyere ụmụ nwanyị. , LGBTQI, na ịnweta - njem.
Ngalaba njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ tara ahụhụ karịa nke ọ bụla ọzọ n'ihi oke mgbochi ngagharị.
Onyinye njem & njem nlegharị anya na GDP zuru ụwa ọnụ dara site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 9.2 na 2019 ruo naanị $ 4.7 trillion na 2020.
Ntinye ego isi obodo dara site na ijeri $ 986 na 2019 ruo naanị ijeri $ 693 na 2020.
Kọmitii Njem Njem Nleta Ụwa (WTTC) wepụtara taa akụkọ ọhụrụ dị mkpa nke na -enye ndụmọdụ itinye ego maka gọọmentị na ebe njedebe, ebe ha na -ezube iwughachi ma too ngalaba njem ha na njem.
N'ihi ọrịa ọjọọ na -eme ka njem mba ofesi kwụsịtụ, ngalaba njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ tara ahụhụ karịa nke ọ bụla ọzọ n'ihi oke mgbochi ngagharị.
Onyinye ngalaba a na GDP zuru ụwa ọnụ dara site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 9.2 na 2019, ruo naanị ijeri $ 4.7 na 2020, na -anọchite anya mfu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 4.5. Ọzọkwa, ka ọrịa na -efe efe juputara n'obi ngalaba ahụ, nde njem 62 njem na njem nlegharị anya furu efu ebe ọtụtụ ka nọ n'ihe egwu.
Nkwupụta ahụ na -ekpughe na itinye ego isi obodo gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ (29.7%) n'afọ gara aga, na -agbada site na ijeri US $ 986 na 2019, ruo naanị ijeri US $ 693 na 2020 ma ugbu a, ka anyị na -aga mgbake, itinye ego na njem na njem. enwebeghị oke nkatọ.
a WTTAkwụkwọ C na -egosi etu ọ dịruru mkpa ma ndị na -aga ma ndị gọọmentị ị nweta ego site na gburugburu ebe dị mma na -enyere aka, gụnyere ihe mkpali dị ka ụtụ isi mara mma, atumatu ime njem njem, icheiche, njikọta ahụike na ịdị ọcha, nkwukọrịta dị mma, na ndị ọrụ nwere nkà na nke a zụrụ azụ.
Nkwupụta ahụ na -enyekwa ndụmọdụ dị mkpa maka gọọmentị na ebe njedebe ma gosipụta akụkụ ndị ahụ nwere ike ịmasị ndị na -etinye ego.
Jean-Marie Delort ekwu, sị:
September 17, 2021 na 04: 11
Ọgbọ ọhụrụ na afọ iri ọhụrụ! Ụwa na -agbanwe na anyị kwesịrị ime mgbanwe maka mgbanwe ndị a. Ọ bụ ihe nwute na ọ bụghị gọọmentị niile na -agbaso Usoro a. Ndị njem na -achọ nyocha 3S, na mbụ bụ Oké Osimiri, Anyanwụ na Ọrụ yana ọchị ugbu a, nchekwa, nkwado.